China Single-akụrụngwa waterproofing mkpuchi Manufacturers na Suppliers | Hongyuan
Single-akụrụngwa waterproofing mkpuchi bụ a polima waterproof mkpuchi nke reactive ụdị nke mmiri-pụrụ ịgwọ film. Ọ na-mere nke isocyanate na polyether dị ka isi ihe onwunwe, agwakọta siri ike mmadụ, plasticizers na ndị ọzọ nwekwara ndị ọzọ nwekwara eji pụrụ iche technology site okpomọkụ akpịrị ịkpọ nkụ polyurethane prepolymer na mmiri na ikuku, nke Nleta siri ike, nro na-jointless roba waterproofing film na mkpụrụ .
Single-akụrụngwa waterproofing mkpuchi, mfe ime, na chọrọ ka mmiri ọdịnaya nke isi abụghị elu, ọ ga-etinyere na ihe ooh elu, na-dịnụ n'elu ya bụ ikwu iru mmiri ọzọ bụ nnukwu.
Polyurethane mkpuchi film elu ike na elongation, ezi ekwedo, ezi elu okpomọkụ na ala okpomọkụ na-eguzogide, na elu na ime mgbanwe iji kwekọọ mkpụrụ shrinkage na cracks.
Nwere ike uwe 1mm ka 3mm oké otu oge, ntekwasa film bụ na ok, ọ dịghị egosipụta, na elu na-bonding ike.
Adịghị mkpa ahịhịa mkpụrụ ọgwụgwọ gị n'ụlọnga na ndị dị iche iche mkpụrụ nke dị ruo ọkọlọtọ
Ọtụtụ-eji n'elu ụlọ, na okpuru ulo, ụlọ mposi, ebe igwu mmiri, na ụdị nile nke ụlọ ọrụ na obodo ụlọ waterproofing
Mkpụrụ mkpa ike, ezigbo, dịghị sundries, n'ime akuku na n'èzí n'akụkụ ga ike n'ime okirikiri aak, na dayameta nke Ọnọnime nkuku kwesịrị karịa 50mm, na n'èzí corder kwesịrị karịa 10mm.
Mgwa na onunu ogwu: dị ka ngwa onunu ogwu, evenly agwakọta gburugburu o were.
Reference onunu ogwu: mkpuchi film onunu ogwu bụ banyere 1.3-1.5kg / sqm mgbe ọkpụrụkpụ bụ 1mm.
Large waterproof ngwa, mkpuchi Ime Otu mbuaha mkpuchi na a roba ma ọ bụ plastic akpụcha, na ọkpụrụkpụ bụ onsistent, n'ozuzu ya bụ 1.5mm na 2.0mm, a ga-leghaara na 3 4 ugboro, na oge ikpeazụ brushing ga-eme mgbe gara aga na-eleghara ọrịa na-aghọ film, na brushing na a ertical direction. N'ozuzu ka a iche iche film na-akpụ, n'ihi na ala oru ngo osisi, ga-kpuchie a oyi akwa nke obi mesikwuru ihe onwunwe na mgbakwunye
Mkpuchi ọkpụrụkpụ: ka ala oru ngo ọkpụrụkpụ bụ 1.2 na 2.0mm, n'ozuzu 1.5mm; ka ụlọ mposi ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 1.5mm; na multilayer waterproof nke exposured ụlọ ewu ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 1.2mm; otu oyi akwa waterproof nke ọkwa Ⅲ waterproof, ọkpụrụkpụ bụ ihe na-erughị 2mm;
Fishing oyi akwa ngwa: achụsasịkwa ndị kpochara ájá tupu oge ikpeazụ brushing na-adịghị sikwuo ike.
Protection oyi akwa: na mkpuchi film elu kwesịrị ime mkpuchi nchedo dị ka imewe.
Previous: ngwa ngwa omume waterproof akpụkpọ
Osote: Removable Car Protection Liquid Spray Rubber Coating
Valeron Cross-ụkpụrụ film onwe-nrapado bitume ...
Acryli Waterproof mkpuchi, Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete , Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Tpo Waterproof akpụkpọ,
Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Tpo Waterproof akpụkpọ, Acryli Waterproof mkpuchi, Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete ,